Ihe niile ị ga - achọ ịma gbasara "Oge kacha mma" | Martech Zone
Ihe Ọ Bụla Will Ga-achọ Knowmara Banyere “Oge Kacha Mma”
Sunday, June 28, 2015 Sunday, June 28, 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ na anaghị m ekekọrịta ọzọ oge kacha mmaM ga-enwe obi ụtọ na nke a bụ nke ikpeazụ. Enwere m olileanya na ị ga-ekerịta ya. M nnọọ akwa mgbe ọ bụla m hụrụ a oge kacha mma iji infographic. Oge kacha mma iji Tweet. Oge kacha mma iji melite na Facebook. Oge kacha mma iji zipu ozi-e. Oge kacha mma iji melite LinkedIn. Oge kacha mma iji blọgụ. Argh… ya mere m ara ara.
Mgbe obula mmadu ketara otu n'ime ihe omuma ndia, a na m achoputa otu ha si ewu ewu nke ukwuu ma o ghaghi iju agha. Mana m lere anya n’oge azụmaahịa ma ọ bụ nke ndị mmadụ kesara ya na ha anaghị ebipụta ihe ọ bụla. Etinyela uche n’ihe onye ọ bụla na-eme, payaa ntị n’otú ndị na-ege gị ntị na ndị obodo gị si emeghachi omume, mbak, itinye aka na ndị a tọghatara. Lelee gị nchịkọta - ma closeaa ntị na oge oge ka ị na-ekpebi mgbe oge kachasị mma.
Kedu mgbe m chere na ọ bụ oge kachasị mma iji bipụta? Ozugbo ịchisịrị ide ihe. Kedu mgbe m chere oge kachasị mma iji melite mgbasa ozi mmekọrịta? Mgbe ị nwere oge ma nwee ihe bara uru ịkekọrịta. Ndị na-esote anyị na-aga n'ihu na-eto ma mbipụta anyị nwere ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ n'agbanyeghị oge anyị bipụtara.
Kpọrọ… nke a bụ agbụrụ, ọ bụghị usoro ije ije. Kwụpụ na gas ma na-edozi ụgbọ ala ka ị na-aga. Gbọ ala nke meriri n’ọsọ ahụ anọghị n’etiti mkpọ, ọ na-apụ n’isi.
Tags: oge kacha mmaoge kacha mmaoge kacha mma ijioge kacha mma iji biputereoge kacha mma iji bipụtaoge kacha mma iji zipu ozi-eoge kacha mma iji tweetoge kacha mma iji melite facebookoge kacha mma iji melite njikọ
Ahịa Broadleaf: Tinye ego na Nhazi, Ọ bụghị Ikikere
Etu ị ga - esi zụọ ahịa ma kwalite ihe omume gị na ntanetị